Maraoka : Nenjehina noho ny fanalàm-baraka ilay bilaogera Hassan Barhoum · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2019 4:00 GMT
Nosamborina ny 25 Febroary 2009 noho ny fanambarany ny raharahan-kolikoly nahavoarohirohy an’Atoa Mohamed Masmouki, izay Lehiben’ny Fampanoavan’ny Mpanjaka ao Maraoka tao amin’ny Fitsarana ambony ao Tétouan ny Bilaogera sady mpanao gazety Maraokana miady amin’ny kolikoly, Hassan Barhoum. Tokony niakatra fitsarana izy ny 6 Martsa 2009.
Araka ny filazan’ny CPJ ( Komity mpiaro ny mpanao gazety, ndt) ilay bilaogera ‘’Hassan Barhon, dia voaheloka araka ny andininy faha-263 amin’ny fehezan-dalana famaizana amin’ny heloka bevava momba ny fanalam-baraka ny mpikambana ao amin’ny ‘’Fitsarana’’. Raha meloka i Hassan Barhon dia mety higadra dimy taona an-tranomaizina :
Tamin’ny alalan’ny fanorenan'asa nataony ‘’Journalists Without Limits’’ (Mpanao Gazety Tsy misy Fetra) i Hassan Barhoum dia navitrika tokoa tamin’ny famoahana ny raharahan-kolikoly sy ny raharaham-piraisana tsikombakomba eo amin’ny baroan’ny heloka bevava sy ny zava-mahadomelina ary ireo manampahefana ao amin’ny fitantanan-draharaha ao an-toerana. Nanolotra lahatsary tao amin’ny Dailymotion sy YouTube ihany koa i Hassan.
Tsy i Hassan Barhoum akory no Maraokana nosamborina voalohany noho ny fanehoany ny heviny am-pilaminana tamin’ny aterineto. Tamin’ny taon-dasa ( 2007) dia nosamborina ary voaheloka noho ny asany tamin’ny aterineto ny tanora Maraokana roa. Ny 5 Febroary 2008, nosamborina ary nohelohina telo taona an-tranomaizina sy nandoa lamandy mitentina arivo euros teo ho eo ilay Injenieran’ny Informatika, Fouad Mountada, 26 taona, noho ny famoronany pejy sandoka ho an’i zandrin’ny Mpanjaka Mohammed VI tao amin’ny Facebook. Nahazo famotsoran-keloka feno avy amin’ny Mpanjaka i Fouad ny 19 Martsa 2008, ary niala tao amin’ny fonjan’i Oubacha (Casablanca) izy. Nosamborina ilay bilaogera Mohammed Erraji tamin’ny 5 Septembra 2008, ary voaheloka roa taona an-tranomaizina sy nandoa lamandy dimanjato euros noho ny ‘’tsy fanajana ny Mpanjaka’’. Navoaka ny 18 Septembra 2008 i Mohammed Erraji taorian’ny nanafoanan’ny Fitsarana Avo ao Agadir ny vesatra rehetra niampangana azy, noho ny tsy fetezana tamin’ny dingana momba ny fitsarana azy teo aloha.